No iray Italiana - mampiaraka toerana
No iray Italiana — mampiaraka toerana
Ao amin’ny lisitra ianao dia mahita ny mombamomba ny olona avy any Alemaina, Aotrisy, any Soisa ary ireo firenena hafa ao Eoropa Andrefana. Rehetra ireo dia tena izy, ary izy ireo dia mitady ny ho an’ny lehibe sy ny fifandraisana, izay mety hiafara amin’ny fifandraisana miaraka amin’ny fomba fijery ny fanambadiana izany. Toy izany koa rehefa manao, izy ireo dia tonga italiana Mampiaraka amin’ny fanantenana ny mahita ny fanahiny vady. Italiana Mampiaraka — mampiaraka toerana misahana manokana ny fifandraisana iraisam-pirenena. Nandritra ny taona ny tantara efa nanampy vehivavy an’arivony mba hahita ny nofy mpiara-miasa sy ny mamorona ny fianakaviana sambatra. Ny mpikambana dia resy lahatra ny amin ny matihanina sy ny rafitra tsotra ho antsika sy mitady ny fitiavana. An-tapitrisany irery vahiny, anisan’izany ny Alemà, mitady ny fitiavana ny mpiara-miasa ao amin’ny atsinanana dia ho sambatra amin’ny hoavy.
Nahoana izy ireo manomboka mirona mampiaraka sy manambady any Allemagne? Tokony ho fantatrao, fa: Raha eo am-panaovana ny mampiaraka ao am-ponao dia hoe: ‘eny’ amin’ny famindram-po ny olona avy any Aotrisy, dia tsy mba ‘hampianarana’ azy ireo, ireo dia teraka miaraka amin ny fahalalam-pomba. Dia toy izany no, dia afaka soa aman-tsara ny hitaiza ny fianakaviana iray ary hankafy ny fahasambarana.
Ny Soisa ireo mpandala ny nentin-drazana fa tsy manam-paharoa
Ny hatsaran-tarehy tonga avy ny fomba ara-pahasalamana ny fiainana sy ny fitiavana ny fanatanjahan-tena. Toy ny maro hafa, vahiny, olona avy any Suisse dia mitady ny fitiavana eo amin’ny mampiaraka toerana. Ao amin’ny fikarohana ny mpiara-miasa manerana ny aterineto, dia azo atao ny omit ny mahazatra italiana olona. Hatramin’ny italiana Mampiaraka dia alemana mampiaraka toerana, eto ianao mahita ny ankamaroany dia olona avy any Atsimo Tyrol, ny avaratry ny faritanin’i Italia. Sarotra ny mamaritra ny toetry ny Frantsay, tsy misy ny tena raiki-pohy ho azy ireo.
Izy ireo dia mety ho tena be, amin’ny fomba tsara ny mazava ho azy
Espaina tany maro ny zom-pirenena, izay mahita ny tenany eo amin’ny fifandraisana amin’ny samy efa tahaka ny olona vahiny izy ireo. Raha ny marina, izany rehetra espaniola manana be dia be amin’ny mahazatra, dia manana fijery: ny Antony tokana Italianina avy any Atsimo Tyrol ireo ka mahaliana ny vehivavy araka izay azo atao ny mpiara-miasa. Satria iray Italiana avy any Atsimo Tyrol efa nanangona ny toetra tsara indrindra Aotrisy ny lehilahy sy ny italiana olona. Ny ankamaroan’ny iray Italiana monina any Atsimo Tyrol miteny na ny alemana ary italiana, hatramin’ny roa ireo teny ireo no teny ofisialy. Fiara eny amin’ny arabe Atsimo Tyrol sy ny fizarana tanim-boaloboka mahafinaritra sy ny paoma-tanimboly ianao, dia jereo ny bisikilety hanjo anao ombieny ombieny Izany dia t midika hoe ny Italiana rehetra avy any Atsimo Tyrol dia efa vonona ho amin’ny atsy ho atsy Tour de France fotsiny ry zareo fitandremana mifanaraka amin izany fomba izany. Alpine tia manao ski ambony ao amin’ny ririnina, golf amin’ny vanin-taona mafana, ny fitsangatsanganana ny farihy, ary mandeha ao amin’ny tendrombohitra, ao amin’ny orinasa iray mahafatifaty iray italiana olona no hambabo anareo rehetra. Ny zava-drehetra izy ireo, iray Italiana avy any Atsimo Tyrol hanao tsara sy ho tsara maika dia ny tsy mahazatra ho azy ireo. Italiana ny olona mahatsapa ny fankaherezana sy ny fahafinaretana na dia manao ny asa. Italiana lehilahy aza t hahatsapa hoe mila manao zavatra ny fotoana rehetra. Ny fahafahana haka aina tsy eo handao ihany koa ny mampiavaka ny toetra iray Italiana, raha alemana lehilahy aza t efa izany mihitsy. Ny fitiavana ho an’ny ankizy dia raiki-tampisaka amin’ny teny italiana ny olona. Ihany no tsy afaka mahita ny miakanjo tsara, ary tsara-groomed vehivavy amin’ny namany italiana vadiny teo akaiky teo manosika ny kambana pram eo anoloan’ny azy sy mitondra zazakely eo an-tsorony, ary amin’ny olon-dehibe ny ankizy manaraka ao ambadiky azy, ary mijery ny kilalao izy vao novidina. Araka ny fitiavana ho an’ny filaminana no resahina, no iray Italiana avy any Atsimo Tyrol dia aleo mijery ny tenisy na ny lalao baolina kitra tao amin’ny TV fa tsy mipetraka any ho any amin’ny feno vovoka kianja, ary izy ireo dia ho finaritra sy faly raha toa IANAO ka akaiky. Rehefa mangataka iray Italiana ‘Inona mahatonga anao tsy mitovy amin’ny hafa tandrefana ny olona.’ ianao no mandre ny ‘HATSARAM-panahy’ Fa dia nahoana isika toy ny italiana olombelona amin’ny ankapobeny, ary ny iray Italiana avy any Atsimo Tyrol voasoratra amin ny toerana Fiarahana Italia indrindra. Noho izany, ry vehivavy, miezaha mitady ny fitiavana sy ny fifaliana ao Atsimo Tyrol. Tokana ny Italiana dia miandry anao ao Avaratr’i Italia, ary eo amin’ny iraisam-pirenena mampiaraka toerana italiana Mampiaraka. Ny fiarahana amin’ny aterineto ny vokatr’izany ihany koa dia manana tokan-tena hafa tandrefana ny olona, anisan’izany ny lehilahy alemana, Soisa lehilahy tokan-tena Austrians, sns.
vonona ny mahita tia
← Dia mampiaraka ny olona eo amin'ny Aterineto
Mandeha amin'ny zavatra lehilahy daty →